Nezvedu - Huaian Huafu Yakakosha Kukanda Nylon Co, Ltd.
Huaian Huafu Yakakosha Kukanda Nylon Co, ltd, yakavambwa muna 2007, iri muguta rehuai'an, taundi rekumusha kwekutanga kweChina, zhou en lai iri nyanzvi mukugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvenylon kusanganisira pulley, Slider, Gear, Roller, sleeve , erevheta chisimudziso, Rope gwaro uye ese marudzi akasarudzika akaumbwa zvinhu zvenaironi zvikamu nezvimwe zvinhu.
Huafu inonyanya kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zveyikisoni zvinosanganisira nylon pulleys, nylon tambo giraidhi, nylon giya, nylon gasket, nylon bar, yenyoro inotsvedza, nylon roller uye dzakasiyana dzakasarudzika dzakasarudzika matayoni zvikamu. Munguva yekusimudzira kweanopfuura makore gumi, Huafu akagadzira kuva mumwe wevaya vepamusoro vanotengesa zvigadzirwa zvenylon nevashandi vanopfuura zana kusanganisira vanjiniya gumi nevasere uye pamusoro pegore rinoburitswa nemamirioni gumi emadhora ekuUS.
◉: Yakawanda yemakwikwi mutengo
◉: Zvimwe zvinokurumidza kurongeka kutumira
◉: Yakakura mhando mhando yekuronda
◉: Yakasarudzika nylon zvigadzirwa
◉: 24 maawa ekumira basa
◉: nyanzvi technical timu
Kudiwa kwezvigadzirwa zveNylon zvinowedzera zvakanyanya Sekusimudzira kwehupfumi hwenyika kwemakumi emakore apfuura. Zvigadzirwa zveNylon, Sezvinhu zvisingadzoreke mupurasitiki zvigadzirwa kirabhu, zvakashandiswa zvakanyanya muinjiniya nzvimbo yehunhu hwayo hwakasiyana.
Nylon pulleys ave achishandiswa erevheta kune ruzha rwayo rwepasi, kuzvidzora-mafuta, kudzivirirwa kwetambo uye kuwedzera hupenyu hwebasa remidziyo yese.
Zvakare zvigadzirwa zve nylon zvinoiswa mu crane se pulley, tambo inotungamira kudzikisira kukwesana uye kudzikisira huremu hwese hwemishini, uye michina yakaiswa-nylon-inogona kushandiswawo pachiteshi uko kunoshanda hunyoro nharaunda.
Shongwe crane inoita basa rakakosha mukuvakwa kwemaguta, uye zvivakwa zvinotapura pamusoro pe10% yehupfumi hwenyika. Nylon pulleys zvikamu zvisingadzoreke muchikamu cheshongwe crane yekugadzira uye inogona kutakura ingangoita yakaenzana huremu ichienzaniswa nesimbi pulleys.
Inofananidzwa nesimbi gasket, nylon gasket ine yakanakisa kuputira, kurwisa ngura, kupisa kupisa, isina-magineti zvivakwa, kureruka uremu Saka Inoshandiswa zvakanyanya mu semiconductor, mota, indasitiri yemuchadenga, kushongedzwa kwemukati nedzimwe nzvimbo dzakabatana.
Pamusoro pazvose, nekufamba kwenguva, zvigadzirwa zve nylon zvinowedzera uye zvinogadzirwa munzvimbo zhinji. Nezvakanaka zvaro, nhengo dzenylon zvishoma nezvishoma dzinotsiva mativi esimbi. Uye iyi ndiyo tsika uye inobatsirawo mukusimudzira nharaunda. Ndinovimba vatengi vedu vanogona kutibata, Huafu Nylon`kusangana nezvinodiwa zvako zvechigadzirwa cheyiloni. Pamwe chete tinokudza bhizimisi redu, kumisa yakatsiga pamwe ukama.